प्रधानमन्त्रीका जवाफ, चित्तबुझ्दो या चित्त दुख्दो ? | Hamro Patro
प्रधानमन्त्रीका जवाफ, चित्तबुझ्दो या चित्त दुख्दो ?
भन्दिन भनेपछि भन्दिन, के जबरजस्ती छ ? :प्रम देउवा
सार्वजनिक सुनुवाई अहिले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरुमा पारदर्शिता, सुशाषन, जवाफदेहिता अनि जनताका आवाजहरु बुझ्नकालागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । सरकार अनि सत्ता लगायत जिम्मेवारी लिएका ब्यक्तिहरुलाई बोलाएर जनता अनि सरोकारवालाहरु सँगको यस्ता सुनुवाईहरु वास्तवमै प्रजातन्त्रको अभ्यास संस्थागतताका लागि महत्वपूर्ण छन् । आधारभूत राजनैतिक बजारशास्त्र अर्थात भनौ नेतृत्वको मार्केटिङ्गका लागि पनि यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तर र उदघोषहरु जरुरी मानिन्छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस् : अषाढ १४ मा रोपेको भोट
सामान्यतया नेताहरुको एकोहोरो भाषणभन्दा यस्ता दोहोरा संवादहरुमा जनताहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता र नेतृत्वको तर्कपूर्ण र जिम्मेवार उत्तरका श्रृखलाहरु उत्साहपद रहन्छन् । प्रसंग जोड्न चाहयौ, यससाता गरिएको एउटा यस्तै अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम जहाँ नेपाल राष्ट्रका सम्माननिय प्रधानमन्त्री र जनताहरुबीच सार्वजनिक सुनुवाई भएको हो । बिबिसी मिडिया एक्शनको साझा सवालको ५००औं अकंमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उत्तर र जवाफदेहिताको बारेमा कुरा कोट्याँउदै छौ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा बहुतै फस्टाएको अनि चर्चित बिषय भएको छ प्रधानमन्त्रीको यो सुनुवाई र प्रश्नोत्तरको तर्कहरुको विषयमा ।
लमजुङ्ग बेसीशहरकी सिर्जु पन्तको प्रश्न सुशीला कार्कीलाई बिनाकारण लगाइएको महाअभियोग अनि लोकमान सिंह कार्कीलाई कारवाही गर्न खुट्टा कमाइएको बिषयमा थियो । नेताहरुले कस्तो केटाकेटिले खेलेजस्तो काम गरेको भन्ने बिषयमा सिर्जुको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको उत्तर शायद उति चित्त बुझ्दो आएन्, धेरैले महसुस गरे ।
केहि बोल्न चाहन्न, केही कुरा भयो होला नि । म यस विषयमा बोल्न चाहन्न, जबरजस्ती गरेर हुन्छ ।
धेरैजसो प्रश्नहरु महाअभियोगमै केन्द्रित थिए । सकारात्मक रुपमा चुनाव सफल गराउदै अगाडि बढेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई पनि आएका हुन् ।
देशको सर्वोच्च प्रशासनिक पदमा आसिन प्रधानमन्त्रीको जनतासमक्षको कुरा गराई अनि जवाफदेहिताको दृष्टान्त त उक्त कार्यक्रमले सबैलाई दिएकै छ । अर्कोतर्फ सबैजनाको आआफ्नै धारणा पनि हुन सक्दछ यस सुनुवाईको ब्याख्या गर्ने कुरामा । तथापि एउटा कुरा भने प्रष्ट छ, नेपालमा जवाफदेहि नेतृत्वको भने अभाव नै छ ।
सिगांपुरको उदहारण दिँदै एकजना यूवाले गरेका प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफ अहिले सबैतिर चर्चाको बिषय छ । उत्कृष्ट बिधार्थीहरु र अध्यनशिल ब्यक्तित्वको नेतृत्व नेपालले ७० बर्षदेखि नपाएको र तपाँई बिस्थापित कहिले हुने भन्ने प्रश्न थियो । प्रश्नमा केहि ब्यक्तिगत आक्रोश नभएको भने हैन तथापि जनताको सेवकका रुपमा प्रधनमन्त्रीको आक्रोशित जवाफ पक्कै हाम्रो अपेक्षामा थिएन ।
बिश्वकै शक्तिकेन्द्र अमेरिका, रुस, चीन लगायतका अन्य थुप्रै बिकसित देशहरुका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीहरुले पनि यस्ता प्रश्न र चुनौती सामना नगर्ने हैनन् तर जवाफ र शालिनतासँग उनिहरुले जनतासमक्ष आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तवर प्रधानमन्त्रीले सिक्न जरुरी पनि देखिन्छ । तपाईले चाहेजस्तै बन्नपर्ने भन्ने छ ? तपाँई बढ्ता बोल्दैहुनुन्छ भन्नेजस्ता उत्तरहरुले जनताका सवालहरुको मर्ममाथी प्रहार भएको भान हुन्छ ।
कुरा कुनै बिशेष राजनैतिक पार्टी अनि बैमनस्यताको पक्कै हैन्, कुरा त जनताप्रतिको जवाफदेहिताको हो । जनताको सरकार अनि सत्ताप्रतिको उदासिनताको हो अनि बिकासको धमिलो सपनाको हो ।
चुनावको साँठगाँठ उपर पनि प्रश्नहरु उठेका हुन, संयूक्त सरकारको उदहारण दिँदै प्रधानमन्त्रीले साँठगाँठको ब्याख्या गर्नुभएको थियो ।
नागरीकहरुको साना साना गुनासो अनि आशा अपेक्षाहरु जस्तै गाँउका बाटो, अस्पताल अनि बिधालयको निर्माणमा ढिलासुस्ती लगायतकाकुराहरुमा प्रधनमन्त्रीका रेडिमेड उत्तरहरु सरोकारवाला निकायहरुसँग बुझेर उत्तर दिने प्रतिबद्धता छ भन्ने रहेको छ ।
धेरै गुनासाहरु अनि प्रश्नहरु अझै उत्तर खोज्दै बसेका छन् । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक पदमा आँउदा पार्टी जुनसुकै भएपनि देखेर गर्व र सम्मानगर्न मिल्ने अवस्थाको अपेक्षा भने सबैलाई छ । प्रधानमन्त्रीबाट एकैदिनमा देशको बिकास जनताले खोजेका हैनन तर प्रश्नको उचित उत्तरभने जनताको अधिकार हो, हैन र ?